Lixa Oromiyaatti poolisoota dabalatee lubbuun namoota 41 darbeera - BBC News Afaan Oromoo
Komishiner Alamaayyoo Ijjiguu yeroo miidiyaaleef haala Lixa Oromiyaa irratti ibsa kennan
Rakkoo nageenyaa Lixa Oromiyaatti mudateen ji'oota muraasa darbe kanatti lubbuun poolisoota Oromiyaa 12 kan darbe yoo tau poolisoonni 77 madaa'aniiru. Kamna malees, lubbuun misensota hawaasaa 29 yoo darbu, kanneen 22 ta'an ammoo madaa'uu isaanii Komishinarri Poolisii Oromiyaa Alamaayehuu Ijjiguu himan.
Akka Komishinarichaatti, seeraa maleessummaa tureenis waajjiraaleen poolisii cabsuun kilaashiin 2,070 kan saamame yoo ta'u, maallaqni baankiifi waajjiraalee mootummaa irraa birriin miiliyoonni sadii saaamameera.
Lixa Oromiyaatti gareen shanee jedhamuun beekamu caasaalee mootummaa diiguun caasaa ofiitiin bakka buusuun akka eegalames ibsan.
Mootummaan obsa daangaa darbe agarsiiseen wareegama guddaa kanfalaniiru. Uummannis bir'annaa keessa galuun hojii misoomaa irraa akka gufatu ta'eera.
Iddoowwan akka Baalee, Arsii, Amboo, Giinciifi kanneen birootti garuu uummanni qaamolee kanneen diduun nageenyasaa eegachuuf tumsi taasisaa jiru kan dinqisiifatamuudha jedhaniiru komishinarichi.
Ammaan booda garuu Poolisiin Oromiyaa nageenya uummataa tiksuuf araarama tokko malee tarkaanfii sirreefamaa fudhata, kan jedhan Komishinar Alamayehuun, haalli baruufi barsiisuu, sochiin daldalaafi akkasumas hariiroon godinaaleen Qellem Wallaggaafi Wallagga Lixaa giddu galeessa biyyaa waliin jiru sadarkaa adda cituurra gahaa jira jedhan.
Polisoonni oromiyaa Qellam Wallaggaa, Wallagga Lixaa, Barbaree, Gujiifi kuyyuutti wareegaman qaama shanee ABOtiin akka ta'e ragaa qabatamaa qabna, jedhan Komishinarichi.
Humnoonni 'Abbaa Torbee' nama ajjeessaniifi ajjeesisaa turan tohatamaa jiru kan jedhan Komishinarichi, caasefamaafi qaama ergama kenneefis poolisiin qoratee yeroo dhihootti hawaasaf kan ibsamu ta'ulleen himaniiru.
"Humni saamichaafi caasaa mootummaa diigaa jiru guutumatti ergamaa ABO shaneeti," kan jedhan, komishinich, hawaasni Naannoo Oromiyaa jijiiramni kun akka hin gufanneef tumsa taasisee qaamoota nageenya booreessan saaxiluun seeraan gaafatamoo akka tahan gochuu qabas jedhan.
Yunvarsiitiwwan keessatti yaalii jeequmsa kaasuuf tahe toohatamee baruufi barsiisuun itti fufeera. Caasaa poolisiitiif sochii seera malessummaa kamuu akka dhaabsisuuf tarkaanfii seeraa akka eegsisuuf qajeelfamni kennamerra jedhan Komishinar Alamaayoon.
Gama loltoota ABO Ardaayitaa jiran ilaaluun, ''rakkoon tokkoyyuu leenjii isaanii waliin walqabatee hin jiru. Loltoota isaanii 746 Kolleejjii Leenji Poolisii Oromiyaa Adaamaa jirutti leenjii fudhachaa jiru.''
Loltoonni kunneen wayita leenjii xumuran poolisii Oromiyaa tahanii tajaajilu. Loltoonni ABO hidhanoodhaan jiran koreen hundaa'e mariisisamee akka leenjii galaniif yaaliin taasifamu itti fufeeras jedhan.
"Ta'us hojiin kun caasaa mootummaa aarsaa kaffalchiisaa jira. Waraana mootummaatu nu tuqee ofirraa qolachuuf tarkaanfii fudhanneedha jechuun himanni ABOn dhiheessu dhugaarraa kan fagaatedha. Waliigalteen mootummaafi ABO gidduutti waliigalameefi qabatamaan mul'achaa jiru garaagarummaa bal'aa qaba."
Poolisoota Oromiyaa Fulbaanaa asitti wareegaman keessaa 3 ajajoota poolisiiti. Lama Qellam Wallaggaa tokko ammoo Kuyyuutti.
Komishinar Alamaayehu ibsa haala nageenya Lixa Oromiyaa ilaalchisee BBCf yeroo darbe kennaniin qaamota hidhatani yakka raawwatan adda baasuun seeratti dhiyeessuuf ABOn hidhattotasaa leenjiif akka galan taasisuun qaawwa jiru duuchuuf nu gargaara jedhanii turan.
Humni ABO hidhate bakka inni jiru ni beekama kan jedhan Komishinar Alamaayehu, "Humna kana dafanii mooraa galchuun warri naannoo keenya keessatti tasgabbii hin barbaanne, maqaa isaaniitiin achi kessatti balaa adda addaa uumaniif balballi banaa ta'a jechuudha.
Kanaaf, hidhattoota bakka tokkotti galchuun balbala sana hunda cufa. Kuni qaama ABO mitii waan ta'eef mootummaanis ol-aantummaa seeraa kabachiisuuf qaama sana irratti tarkaanfii fudhata," jedhan.
Lakkoofsi namoota maqaa garee "Abbaa Torbee" jedhamuun dhuksaan nama ajjeesaniifi ajjeesisuun shakkaman to'annaa jala oolan 15 akka ga'uu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaa jiru.
Biiroo Dhimmoota Komunikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa waabeffachuun miidiyaaleen akka gabaasanitti shakkamtoonni jedhaman kun naannoo Oromiyaa bakka gara garaa keessa dhoksaadhaan socho'uudhaan namoota ajjeesuufi ajjeesisuudhaan warri shakkaman hordoffii Tajaajila Odeeffannoofi Tikaa Biyyaalessaa taasiseen humna nageenyaan to'atamaa jiru.
Shakkamtoonni jedhaman kunneen maqaa "Abbaa Torbee" jedhuun gurmaa'anii namoota nagaa, aanga'oota mootummaafi humnoota nageenyaa ajjeesuufi ajjeesisuudhaan shakkamuun to'ataman.
Namoota shakkiin to'annaa jala oolan jedhaman keessaa Gaaddisaa Nagaasaa Caalaa, Margaa Tafarraa Bulchuufi Annisaa Getaachoo keessatti kan argaman yommuu ta'u ajjeechaa Dambi Doolloo, Naqamteefi Kaabaa Shawaatti raawwatame qindeessaa turan jedhaman.
Shakkamtoonni kun shuguxii, boombiifi meeshaaleen waraanaa gara garaa waliin to'annaa jala akka oolan ragaan Tajaajila Odeeffannoofi Tikaa Biyyaalessaa akka mul'isu biiroon kun beeksiseera.
Shakkamtoonni kunneen to'annaa jala kan oolan magaalaa Finfinneetti yommuu ta'u kan magaalattii keessa buufatanis aanga'oota mootummaa ol-aanoo, namoota beekamoofi rogeeyyii ajjeesuudhaaf akka ta'es bira ga'ameera.
Shakkamtoonni har'a to'annaa jala oolan kunis humnoota Lixa Oromiyaa keessa hidhannoon socho'an waliin walitti dhufeenya kallattii akka qabaata turan dhaga'meera
Shakkamtoota hafan to'annaa jala oolchuun cimee kan itti fufeera jedhan. Akka Komishinar Alamaayehuu jedhanitti rakkoon daangaa naannoo Somaalee waliin jiru fooyya'iinsa muliseera, Mooyyaaleetti ammoo raayyaan waraanaa gidduu seenuun tasgabbiin uumamaa jira.
Kan Beenishaanguliin walqabateen rakkoo mudate poolisiin Oromiyaa akka hin qaqaabneef goch daandii cufuu taasifamaa turuu eeran Komishinar Alamaayehu.